Doctor Prisoner – Myanmar Subtitles
Genre: Drama, Mystery, Thriller Actors: Byeong-cheol Kim, Min Namkoong, Nara, Won-young Choi Country: South Korea Released: 2019-03-20 Networks: KBS2 Type: TV Episodes: 32 Score: 7.9 Duration: 35 min Quality: 720p HD Years: 2019 View: 0
Doctor Prisoner ( 2019 )
My Drama list မှာ 8.4ထိရရှိထားတဲ့ကားလေးနဲ့
မင်းသားအနေနဲ့ကတော့ ကိုလူချောထဲက Nam Goong Minနဲ့
တရားသူကြီးမင်းထဲကမင်းသမီးလေး Nara တို့ဖြစ်ပါတယ်
နာရီဂျေး ဆိုတဲ့ဆရာဝန်ဆိုရင် ထယ်ဂန်းဆေးရုံက
မသိတဲ့သူ မရှိသလောက်ပါပဲ ရုပ်ချော သဘောကောင်း
ထယ်ဂန်းဆေးရုံရဲ့ အတော်ဆုံး ဆရာဝန်ဆိုလဲမမှားပါဘူး
>>> တစ်နေ့ အထက်လူကြီးအကူအညီနဲ့ သူ့အမေကို
သူ့အတွက်တော့ အပျော်ဆုံးပေါ့ အဲ့နေ့မှာပဲ
(ဇနီးသည်က ကိုယ်ဝန်သည်)ကို သူက သူ့အိပ်စိုက်ပြီး
ပျော်ရွှင် နေတဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက် ပျော်လို့ပင်
ခင်ပွန်းသည်က ဆေးရုံရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲ သူ့ဇနီးကို
ဒေါက်တာနာရီဂျေးကို ကယ်ဖို့ပြောပြီး သေသွားခဲ့တယ်
( ကားအက်စီးဒန့် ကြောင့် ထယ်ဂန်းဆေးရုံ ပိုင်ရှင်သမီး
လီဂျေးအင် နဖူးပွန်းသွားခဲ့တယ် )
ကားအက်စီးဒန့်ကြောင့် မေ့မျောနေတဲ့ကိုယ်ဝန်သည် ဇနီးသည်ကို
ခွဲစိတ်နေစဉ်မှာ ထယ်ဂန်းဆေးရုံပိုင်ရှင်သား လီဂျယ်ဟွမ်
ရောက်ရှိလာပြီး သူ့ညီမ နဖူးဒဏ်ရာပိုကုသဖို့ပြောပါတယ်
နာရီဂျေး စီနီယာကို အကူအညီတောင်းပြီး
ခဏထွက်တွေ့ခဲ့ပါတယ် ခွဲစိတ်နေလို့ ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာကို
သူ့ညီမကိုကြည့်မပေးလို့ ရန်ငြိုးထားတဲ့ လီဂျယ်ဟွမ်က
ဆရာဝန် လိုင်စင်လဲ အသိမ်းခံရ အမေဖြစ်သူလဲ ခွဲစိတ်ခွင့်မရတော့ပဲ
Subtitles Syns By ZeroKyaw SoeLwin
Myandrive Myanmar (256mb) Download
#Doctor Prisoner #Download Doctor Prisoner Full Movie #Free Doctor Prisoner Download
One response to “Doctor Prisoner”
It is appropriate time to make some plans for the long run and it’s time to be happy. I have learn this put up and if I may I desire to counsel you few attention-grabbing issues or suggestions. Maybe you can write subsequent articles relating to this article. I desire to learn more things about it!
Kyaw Zaw Linn says: